Lahatsarin-kira 12 Niavaka Tao Taiwan Tamin’ny 2013 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2014 22:17 GMT
Namoaka tsipalotra iray ho an'ny seho an-tsehatra tao tamin'ny 2013 ny “Taiwan Music Writing Group”, bilaogy iombonana natao hitsikerana mozika. Indro ny fantina iray ahitàna ny 12 amin'ireo artista sy tarika ireo, arahan'ny lahatsary avy ao amin'ny Youtube.
Miaraka amin'ny fisian'ny disadisa eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ara-toekarena any amin'ny faritra Atsinanan'i Taiwan, na dia i Chang Chen-Yue be lalao iny aza mba nampahalala ny fiaviana Amis nipoirany ary nihira hoe: Izaho no Ayal komod [Ayal komod dia anarana Amis ho an'i Chang Chen-Yues amin'ny fiteny].
Manambatra ny mozikany amin'ny alalan'ny ipad ilay mpanankato vao erotrerony Chiu-Pi ary amin'ny fomba tsotra no hihiràny ilay tantaram-pitiavana “We Must Love (Tsy Maintsy Mitia Isika).”
Misy zavatra bebe kokoa mikasika ireo kapila avy amin'ireo mpanakanto ao Taiwan nivoaka ny taona 2013 ao amin'ilay “Music Writing Group”: (I), (II), (III), (IV), ary (V).